မာဒေးကား နန်းတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
မာဒေးကား နန်းတော် (အင်ဒိုနီးရှား: Istana Merdeka; အင်ဒိုနီးရှားတွင် အီစတန်နာ ဂမ်ဘီယာ ဟုလည်း သိရှိကြပြီး ဒတ်ချ်ကိုလိုနီခေတ်တွင် Paleis te Koningsplein ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်) သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ သမ္မတနန်းတော် ၆ ခုအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့လယ်ရှိ မာဒေးကားရင်ပြင်၏ မြောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ၏ နိုင်ငံတော်အိမ်တော် အဖြစ် အသုံးပြုသည်။
The front facade of Merdeka Palace
Jalan Medan Merdeka Utara Gambir
ဂျာကာတာမြို့ 10160, အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ
Jacobus Bartholomeus Drossaers
ကိုလိုနီခေတ်တွင် ဤနန်းတော်သည် အရှေ့အင်ဒီ ဒတ်ချ် ဘုရင်ခံချုပ်၏ အိမ်တော်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင်မှ နန်းတော်၏ အမည်ကို မာဒေးကား နန်းတော်ဟူ၍ ပြောင်းလဲခဲ့ကာ "(ke)merdeka(an)" လွတ်လပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွတ်လပ်ရေး ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
မာဒေးကား နန်းတော်သည် နီဂါရာ နန်းတော်၊ Wisma Negara (State Guesthouse), Sekretariat Negara (State Secretariat), နှင့် the Bina Graha building တို့ပါဝင်သော 6.8 hectares (17 acres) ကျယ်ဝန်းသည့် ဂျကာတာ သမ္မတ နန်းတော်ဝင်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဤနေရာသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ၏ ဗဟိုချက်ချာဖြစ်သည်။
၁.၂ ဂျပန်တို့ သိမ်းပိုက်စဉ်ကာလ
၁.၃ လွတ်လပ်ရေးရပြီး ခေတ်
၂ မာဒေးကားနန်းတော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
အင်ဒိုနီးရှားအား ဂျပန်တို့ သိမ်းပိုက်စဉ်ကာလ (၁၉၄၂-၁၉၄၅) ကာလအတွင်းတွင် ဆာအီကို ရှီကီကန် (စစ်ဦးစီးချုပ်)၏ အစောင့်တပ်ဖွဲ့သည် Rijswijk Palace ပရဝဏ်အတွင်းတွင် စခန်းချခဲ့သည်။ ဂျပန်ဦးစီးချုပ် ၃ ဦးမျှ မာဒေးကားနန်းတော်တွင် နေထိုင်သွားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသား တော်လှန်ရေး အဆုံးတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတနိုင်ငံအား အသိအမှတ်ပြုခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ဂမ်ဘီယာနန်းတော်တွင် ဒတ်ချ်ထံမှ လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် ဒတ်ချ်အလံအား အင်ဒိုနီးရှားအလံဖြင့် အစားထိုးခဲ့ရာ အလံတင်နေစဉ်တွင် များလှစွာသော လူပရိသတ်ကြီးသည် "Merdeka! (လွတ်လပ်ရေး!)" ဟူ၍ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာ အော်ဟစ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဂမ်ဘီယာနန်းတော်သည် မာဒေးကာ နန်းတော်အဖြစ် ထင်ရှားလာခဲ့သည်။® ကော်မရှင်နာမင်းကြီး တိုနီ လိုဗစ်သည် နန်းတော်မှ ထွက်ခွာရတွင် ဒတ်ချ်တို့၏ အာဏာတည်ရှိမှုကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သည် နောက်ဆုံးသော သူပင်ဖြစ်သည်။ နန်းတော်အား မာဒေးကား နန်းတော် (လွတ်လပ်ရေး နန်းတော်) အဖြစ် တရားဝင် ပြောင်းလဲခဲ့မှုကို ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက် ၁၅.၇၇ နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နာမည်ပြောင်းလဲမှု အခမ်းအနားမလုပ်မီ ရှေ့တစ်ရက် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် သမ္မတ ဆူကာနိုနှင့် ၎င်း၏ မိသားစုသည် Yogyakarta မြို့မှ ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတနိုင်ငံ၏ သမ္မတသည် မာဒေးကား နန်းတော်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် နေထိုင်ခဲ့သည်။
ပထမနှစ်ပတ်လည် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားကို မာဒေးကားနန်းတော်၌ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
၁၈၇၉ ခုနှစ် နန်းတော် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ အကြီးအကျယ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်း မရှိပေ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးသောအခါ နန်းတော်ဝင်းကို တိုးချဲ့ခဲ့ရာ အီစတန်နာ နီဂါရာ နန်းတော်တင်သာမက ဆက်လက်ဆောက်လုပ်မည့် Wisma Negara, Sekretariat Negara (State Sectreatiat) and Bina Graha တို့လည်း ပါဝင်လာခဲ့သည်။ Weltevreden area အတွင်းရှိ များလှစွာသော ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အဦများ၊ နေအိမ်များကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပြီး ယနေ့ခေတ် ဂျကာတာ သမ္မတ နန်းတော်ဝင်းအား ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နန်းတော်ဝင်းအတွင်းတွင် အဋ္ဌဂံသဏ္ဌာန် gazebo တစ်ခုရှိပြီး ထိုအဆောင်ကို ဆူကာနိုနှင့် သူ၏ နန်းတော်ဝန်ထမ်းများ၏ သားသမီးများအတွက် သီးသန့်ကျောင်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို gazebo သည် ဒတ်ချ်ကိုလိုနီခေတ်တုန်းက muziekkoepel (music gazebo) အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ပြီး formal balls များအတွင်း တေးဂီတ ဖျော်ဖြေပွဲများ ကျင်းပခဲ့သည်။
ဆူဟာတို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ သမ္မတဖြစ်လာသောအခါ နန်းတော်၏ အဆောင်ချထားမှုကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ဆူကာနို၏ အိပ်ခန်းကို Ruang Bendera Pustaka (Regalia Room) အဖြစ် လည်းကောင်း၊ ဆူကာဇနီးအိပ်ခန်းကို သမ္မတအိပ်ခန်းအဖြစ်သို့ လည်းကောင်း ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ နန်းတော်ဝင်းအတွင်းရှိ "Sanggar" ဟုခေါ်သည် အဆောက်အဦကို ဖျက်ချ၍ Puri Bhakti Renatama ဟုခေါ်သည့် အဆောက်အဦကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ကာ တန်ဖိုးကြီးသော ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ၊ အနုပညာလက်ရာများနှင့် နိုင်ငံခြား သံအဖွဲ့တို့၏ လက်ဆောင်များအား သိမ်းဆည်းသည့် ပြတိုက် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်တွင် Bina Graha အဆောက်အဦကို နန်းတော်ရင်ပြင်တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ ရုံးခန်းအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
မီဂါဝါတီ တာဝန်ထမ်းဆောင်သောအခါတွင် သမ္မတ ရုံးခန်းကို Bina Graha အဆောက်အဦမှ Puri Bhakti Renatama အဆောက်အဦသို့ ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူမသည် နန်းတော် ပရိဘောဂနှင့် အပြင်အဆင်တို့ကို သမ္မတ ဆူကာနိုလက်ထက်ကအတိုင်း ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Ruang Jepara (Jepara Room, ဆူဟာတို အစိုးရ၏ အမှတ်တရအဖြစ်) အခန်းမှ ဆူဟာတို၏ ပရိဘောဂပစ္စည်းများအား ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ကိုလိုနီခေတ် လက်ရာဟောင်းများဖြင့် ပြင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မာဒေးကား_နန်းတော်&oldid=438069" မှ ရယူရန်
၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၂:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၂:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။